Marka liiskaaga Google My Business uu noqdo khadkaaga nolosha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Marka liiskaaga Google My Business uu noqdo khadka noloshaada
Marka liiskaaga Google My Business uu noqdo khadka noloshaada
Maalmihii u dambeeyay iyo toddobaadyadii dhawaa waxay ahaayeen mugdi markii aan ka caawiyay macaamiisha inay maareeyaan sumcaddooda internetka iyada oo ay jirto masiibo caalami ah oo sii wadda inay gaysato khasaare culus. Marar badan Google My Business waxa ay ku jirtay isha duufaanka, iyada oo ganacsiyadu u soo jeesteen liiskooda GMB si ay dadka u ogeysiiyaan isbeddelada lama filaanka ah ee u dhexeeya saacadaha dambe ee la dhimay ilaa xidhitaanka ku meel gaadhka ah. Waa kuwan saddex xaqiiqo oo ka soo baxay khibraddan:
1. Liiskaaga GMB waa khadka noloshaada
Xaaladaha caadiga ah, dadku waxay ku tiirsan yihiin liiska GMB si ay u helaan macluumaadka muhiimka ah sida saacadaha dukaanka iyo dib u eegista macaamiisha si ay wax badan uga bartaan goobta ganacsiga. Intii lagu jiray cudurka faafa ee coronavirus, dabeecadda raadintaas ayaa si degdeg ah isu beddeshay iyadoo habdhaqanka macaamiisha uu isbeddelay. "Waa maxay saacadahaagu?" noqday "Miyaad furantahay inta aan meesha gabaad ku jirno?" "Maxuu u eg yahay menu-kaagu?" noqday "Ma bixisaa geyn dhinaca geeskeeda ah?"
Ganacsiyadu waxay u baahdeen inay si degdeg ah uga jawaabaan gaar ahaan horraantii socodka markii Google uusan wali soo saarin astaamo gaar ah si ay u taageeraan dhajinta macluumaadka la xiriira COVID-19. Waxay u baahdeen inay wadaagaan hababka gaarka ah ee ay raacayaan si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada macaamiisha, la'aanta (ama la'aanta) alaabta ku jirta khaanadaha dukaamada, iyo saacadaha la dhimay ama xidhitaanka ku meel gaadhka ah, iyo kuwo kale oo muhiim ah.
Sida ay goboladu u meelmariyeen waajibaadka hoyga-meel, ganacsiyada muhiimka ah waxay u baahdeen inay xasuusiyaan macaamiisha inay, runtii, wali furan yihiin. Qaar badan ayaa ku tiirsan Boostada Google ama astaamaha Q&A, laakiin samaynta sidaas mar walba ma ahayn waddo la isku halayn karo iyadoo Google ay hakisay shaqeyntii Q&A hal mar. Si fudud loo dhigo, haynta liiska GMB ee casriga ah waxay wax ka bedeli kartaa ganacsiga xitaa sii socoshada - walina way sii socotaa iyadoo masiibada ay sii socoto faafitaanka.
2. Google ayaa ka jawaabaya
Inkasta oo Google ay ka digtay in la dhimo taageerada, shirkaddu waxay wali qaaday tillaabooyin dhowr ah si ay uga caawiso ganacsiyada inay maskaxda ku hayaan sumcaddooda liisaska GMB. Tusaale ahaan, Google waxay hakisay dib u eegista macaamiisha iyo shaqeynta Q&A si ay ganacsiyada uga ilaaliso faafitaanka macluumaadka khaldan iyo dadka si aan cadaalad ahayn u xumaanaya sababo la xiriira xaaladahooda ka baxsan.
Waqti ka dib, Google wuxuu bilaabay inuu bilaabo astaamo si uu ugu fududeeyo ganacsiyada inay la xiriiraan macluumaadka muhiimka ah, sida nooca Boostada COVID-19 si ay uga caawiyaan ganacsiyada inay si dhakhso leh u cusbooneysiiyaan bogaggooda Google My Business (GMB) macluumaadka la xiriira coronavirus ee saameeya howlahooda ama ikhtiyaar "ku-meel-gaar ah u xiran" ganacsiyada uu xiray COVID-19. Markii ganacsiyadu ka warbixiyeen cilladaha sifooyinkaas, Google si degdeg ah ayey uga jawaabtay si ay u hagaajiso. Caadi ahaan, Google-ku si fudud ayuu ula nool yahay cilladaha marka la soo sheego, isagoo aqbala xaqiiqada ah in xitaa bilawga ugu horreeya ee aan dhammaystirnayn ay caawiso macaamiisheeda. Ma aha markan. Google waxa ay ogaatay in ganacsiyadu ay u dagaalamayaan si ay u sii noolaadaan, iyada oo aan eber khalad ah lahayn.
Waxaa jira dahaar qalin ah oo xanuunka dhexdiisa ah. Waxaan filayaa in Google ay samayn doonto qaar badan oo ka mid ah sifooyinka ku meel gaadhka ah ee ay shirkadu samaysay intii lagu jiray aafada, sida soo qaadida xayndaabyada iyo sifooyinka keenista aan lala xidhiidhin ee makhaayadaha. Suurtagalnimada in sifooyinkan laga dhigo kuwo si aad ah uga dhex muuqda guddiga aqoonta waxay caawin karaan oo kaliya ganacsiga.
3. "Ku filan" hadda kuma fiicna
Dabayaaqadii Diseembar, waxaan wax ka qoray baahida ganacsiyada si ay u maareeyaan liiskooda GMB sida ugu badan ee suurtogalka ah. Waxaan ganacsiyada u kala qaybiyay saddex qaybood: Google Master (kuwa cusbooneysiiya GMB-yadooda maalin kasta), Google Journeyman (kuwaas oo cusbooneysiiya GMB-yadooda toddobaadlaha ah), iyo Google Apprentices (kuwaas oo sameeya bishiiba).
Afar bilood ka dib, waa markii aan dib u eegis ku samayn lahayn fekerkeena: adiga ama Google Master-ka ayaad tahay ama waxaa laga yaabaa inaad ka maqnayd ganacsiga. Waxaan hadda aragnaa sida GMB u yahay halbowlaha nolosha ganacsiga inta lagu jiro xilliga carqaladeynta. Waxaana jiri doona wax badan oo kala ah: masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa bani’aadamku saameeyaan oo carqaladeeya ganacsiga digniin la’aan. Marka carqaladahaas dhacaan, liiska GMB wuxuu bixiyaa safka koowaad ee jawaabta.
Casharka la baranayo waa kan: ha sugin khalkhal aad maskaxda ku hayso liisaska GMB. Meheradaha horeyba si dhow ugu maareynayay nuxurkooda ayaa si wanaagsan ugu diyaar garoobay inay ka fal-celiyaan masiibada marka loo eego kuwa u oggolaaday liisaskooda inuu dhaco. Meheradaha wakhti geliyey inay bartaan sida loo maareeyo astaamaha sida Google Posts-ka ayaa awooday inay si degdeg ah u socdaan si ay macaamiishooda ula socodsiiyaan maalmihii hore ee masiibada marka loo eego kuwa cagaha fidsan lagu qabtay. Si fiican u habee liisaskaada GMB hadda. Weligaa ha ka daalin.
App-ka cajiibka ah ee sawirka Darkroom hadda wuxuu sameeyaa muuqaal
Kacdoonka COVID-19 ayaa runtii dardar gelinaya qaar ka mid ah ololayaasha PPC [Muuqaal]